မင်းတို့ ဘယ်ကိုရောက်နေ ရောက်နေပေါ့။ အဲဒီညကျရင်တော့ ငါလည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိသေးဘူး :P တစ်ကောင်တည်းပဲ နယူးရီးယားကြိုရမလား အိပ်ပဲအိပ်နေတာကောင်းမလား ဒါမှမဟုတ် လျောက်သွားရင်နဲ့ ယမကာလေးတွေသောက်ရမလား မစဉ်းစားတတ်အောင်ပါပဲကွာ။ သေချာတာကတော့ မင်းတို့ဆီကို ဖုန်းဆက်ဖြစ်မှာပါပဲ။ မင်းတို့ဘယ်လိုလည်ကြတယ်ဆိုတာသိပြီး ငါလည်း စိတ်ကူးထဲက လိုက်လည်လိုက်တော့မယ်ကွာ :P မင်းလည်း သင်တန်းတွေ တက်နေတာကောင်းတယ်ကွာ။ စီးပွားရေး လုပ်မယ်ဆိုတော့ မင်း Management တက်တာကောင်းပါတယ်ကွာ။ ငါလည်းတက်ချင်တယ် အခုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ အဲဒီဘာသာက လူတိုင်းအတွက် လိုတယ်လို့ထင်တယ်လေ။ နောက်ပြီး စိတ်မကောင်းတာ တစ်ခုက မင်းပြောတဲ့ ဗိုလ်နွေးကြီး သိပ်မဖြေနိုင်တာကိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဆင်ပြေပါစေလို့ ငါဆုတောင်းပေးပါတယ်ကွာ။ မောင်နေမျိုးလေးကတော့ ဖြေနိုင်တာသိလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ သူ့မှာက ဆရာမ ကစ်ကစ်ပေးတဲ့ ခွန်အားတွေရှိတယ်လေ :P ဒါကြောင့် ဒီကောင်ကြီး ဖြေနိုင်တာလည်း ပါမှာပါ။ ငါလည်း ဒီမှာ စာလုံးဆိုတဲ့ နာမည်ရနေတော့ မယ်ကွာ။ စာတွေနဲ့ လုံးနေရလို့။ ငါ့ကောင်ရေ တကယ်ပါပဲ စာက အပေါ်ကရောက်လိုက် ကိုယ်ကအပေါ်ကရောက်လိုက်နဲ့ :P ဒါပေမဲ့ စာက ကိုယ့်ပေါ်မှာ ရောက်တာက ပိုများနေတယ်ကွာ :P မင်းကိုလည်း မေးမလို့ မမေးလိုက်ရတာ မင်းသီဟကိုရောက်ဖြစ်လားလို့။ ငါတို့ မနက်ဆို မင်းသီဟမှာ စားရင်းသောက်ရင်း တော်ကီပွားခဲ့ကြတာတွေကို သတိရလို့ပါ။ မင်းလည်း ထိုင်တော့ထိုင်ဖြစ်မှာပါ။ ငါသိပါတယ်။
နောက်ပြီး ၁၆ ကျောင်းနားလေးက ငါတို့ရဲ့ ဖောက်သည်ကြီး ကိုမြင့်လွင်ဆီရော မင်းရောက်ဖြစ်တယ်မလား။ ဒုတ်ထိုးနဲ့ သူဌေးဖြစ်နေတာ မန်းလေးမှာ သူတစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ် :P လောလောဆယ် ဒီမှာတော့ ဒုတ်ထိုးဆိုတာ ဓာတ်ပုံပဲရှိတယ်ကွ :P ငါလည်း ပျင်းရင်တော့ ဒီနေရာလေးမှာ မန်းလေးအကြောင်းတွေ ရေးဖြစ်နေတယ်ကွာ။ မန်းလေး အလွမ်းပြေ အနေနဲ့ပေါ့။ မင်းတို့ကတော့ သိပ်ဖတ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မန်းလေးမှာကလည်း ကွန်နက်ရှင်က နှေးတာမှ လ်ိပ်ရဲ့ အဘိုးလောက်ဆိုတော့ သိပ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး ဘလော့တွေကိုလည်း တိုက်ရိုက်ဝင်လို့မရဘူးကြားတယ်။ ပိတ်ရင်း ပိတ်ရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ...တာ ဖြစ်မဲ့ကောင်တွေပါကွာ။ ဒါပေမဲ့ ဟိုနေ့က မင်းနဲ့ မောင်နေမျိုး မေးလ်ပို့ထားတာတွေ့တော့ ငါအရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ မင်းငါ့အိမ်ကို လာသွားတယ်ဆိုတာလည်း ငါ့အမေနဲ့ ဖုန်းပြောဖြစ်လို့သိရတယ်။ မင်း ငါ့အမေဆီက အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေ ရသွားလိမ့်မယ်လို့ ငါယုံကြည်ပါတယ်။ သိချင်တာရှိရင် သွားသာမေးပါ။ အားမနာပါနဲ့ကွာ ငါ့အမေဆိုတာ မင်းအမေပဲပေါ့။
ဖိုးလုံးကြီးနဲ့ရော လျောက်သွားဖြစ်တယ်မလား။ ဒီကောင်ကြီးက မင်းကို တော်တော်ချစ်တယ်ကွ။ ငါသိတယ်။ ငါလည်း ဖိုးလုံးတို့ညီအစ်ကိုကို သတိရပါတယ်။ ဟိုးအရင်နှစ် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်တုန်းက ငါတို့ သူ့အိမ်မှာ ကြက်သားဟင်းချက်စားတာ မှတ်မိတယ် :P မင်းလည်း ဂိမ်းဆော့တုန်းပဲလို့ထင်တယ်။ မင်းကတော့ ဂိမ်းကို တော်တော်ကြိုက်တယ်နော်။ ငါကတော့ သိပ်ဝါသနာမပါဘူး :P အေးပေါ့လေ ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ လုပ်ကြသလိုပေါ့ :P နောက်တစ်ခုက မင်း ... ကျုံးဘေး သွားဖြစ်သေးလားလို့ ငါမမေးလိုက်ရဘူးကွာ။ ငါကတော့ ပြန်လာလို့မှ မင်းတို့မရသေးရင် နှစ်ယောက်လုံးကို ချောင်ပိတ်ပြီး ပေးစားပစ်မယ် :P ဘေးကနေကြည့်ပြီး အားမရတော့ဘူး။ ဟိုတစ်ယောက်ကလည်း လွန်လွန်းတယ်ကွာ။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တန်ရင်တော့ မင်းနဲ့ပဲ အဆင်ပြေမှာပါကွာ။ ငါ သိနေပါတယ် :P
မင်း ... ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိတယ်ဆိုရင် ငါ ရေးရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ငါကတော့ ဒီလို စိတ်ထဲရှိတာတွေကို ဘလော့မှာ လာလာရေးပြီး အပျင်းပြေအောင် လုပ်နေရတာပဲကွာ။ ဒါလည်း ငါ့ရဲ့ အပျင်းပြေနည်းတစ်မျိုး (၀ါ) အလွမ်းပြေနည်း တစ်မျိုးပေါ့ကွာ။ မင်းငါ့ကို ပြောခဲ့တဲ့ အားပေးစကားတွေအတွက်လည်း ကျေးဇူးပါကွာ။
thank for writing like that, I also miss my mandalay, i also from mandalay, i miss my friend, and everything from mandalay.I hope one day we can enjoy with our friends in mandalay after we get want we want.
CMS 8:10 pm
yes, bro/sis :) we are waiting for that time. thz for visiting my blog :)